पिएसएलमा पहिलो खेल खेल्दै सन्दीप, कस्तो रहला प्रदर्शन? - नेपाल समय
पिएसएलमा पहिलो खेल खेल्दै सन्दीप, कस्तो रहला प्रदर्शन?
काठमाडौं- नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका महत्वपूर्ण सदस्य लेग बे्रक स्पिनर सन्दीप लामिछाने यतिबेला युएईमा छन् । उनी पाकिस्तान सुपर लिग (पिएसएल) टी-२० क्रिकेका लागि यतिबेला दुबैमा रहेका हुन् । पिएसएलमा सन्दीपले लाहोर क्वालान्दर्सबाट खेल्नेछन् ।
तीन खेल खेली सकेको लाहोरमा सन्दीपका लागि भने आज डेब्यु खेल रहने छ । सन्दीपले आज मुल्तान सुल्तानविरुद्धको खेलबाट डेब्यु गर्ने छन् । खेल नेपाली समय अनुसार साँझ ५:१५ बजे सुरु हुने छ । उनको टिमले अहिलेसम्म एकमा जित र २ खेलमा हार ब्यहोर्दै अंक तालिकाको पुछारमा छ ।
अष्ट्रेलियामा सम्पन्न बिग ब्यास लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका नेपाली युवा खेलाडी सन्दीपको पिएसएलमा प्रदर्शन कस्तो रहला त्यो भने कौतुहलताको बिषय रकेको छ । बिग ब्यासका कारण सन्दीपले पिएसएलका सुरूआती ३ खेल गुमाएका हुन् ।
बिग ब्यासमा मेलबर्न स्टार्सबाट खेलेका सन्दीपले ८ खेल खेल्दै ११ विकेट लिए । बंगलादेश प्रिमियर लिगमा सिल्हेट सिक्सर्सबाट ६ खेलमा ४ विकेट लिए । गत वर्ष इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)मा दिल्लीबाट खेल्न सुरू गरेका सन्दीपले विश्वका हरेक जसो ठूलो फ्रेन्चाईज लिगमा सहभागीता जनाइसकेका छन् ।
लाहोर क्वालान्दर्सले न्यूनतम् ५० हजार डलरमा सन्दीपलाई खरिद गरेको थियो । विदेशी खेलाडीको गोल्ड क्याटागोरीमा रहेका सन्दीपको पारिश्रमिक कम्तीमा ५० हजारदेखि ७० हजार अमेरिकी डलरसम्म हुनेछ ।
चौथो संकरणको पिएसएल १७ फेब्रुअरी देखि १७ मार्चसम्म युएई र पाकिस्तानका विभिन्न शहरमा हुनेछ । यसको उद्घाटन खेल यूएईको दुबईमा भयो भने फाइनल खेल पाकिस्तानको कराँचीमा हुनेछ ।